Ashton Kutcher, Mila Kuni ပန်းခြံကို Beverly Hills မှာရှိတဲ့ကလေးတွေနှင့်အတူကစားခြင်းပျော်စရာရှိသည်
သူတို့ကစားကွင်းမှသူတို့သားသမီးယူဆောင်လာသောအခါမနေ့က Beverly Hills မှာ၌, paparazzi, ကျော်ကြားသရုပ်ဆောင်တွေမှာ Ashton Kutcher နှင့်သူ၏ဇနီး Mila Kuni ၏ဓါတ်ပုံများကိုယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွဒေမေတရိလုံးဝကင်မရာများ၏ flash ကိုရန်မအာရုံကိုတစ်ခုဖြစ်သည် Wyatt နှင့်အတူကစားခြင်းသုံးနှစ်နှင့်တဆယ်ရှစ်လအတွင်းဒီတော့အလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ ပုံအဖြစ်, ဒီလမ်းလျှောက်မဆုတ်မနစ်သူတို့သားသမီးနောက်တော်သို့လိုက်သောသူလေးတွေ, ဒါပေမယ့်လည်းသရုပ်ဆောင်များကိုသာပျော်စရာပါပဲ။
သုံးနှစ်ကြာ Wyatt နှင့်အတူ Mila Kuni
Kuni နှင့် Kutcher ၏ဘဝနှင့်အလုပ်ကိုလိုက်နာသူများသည်ပရိသတ်တွေ, သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အသက်တာ၌ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည့်ရှုချင်ဘယ်တော့မှအတော်လေးရိုးရှင်းစွာဝတ်ဆင်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ မနေ့ကရဲ့လမ်းလျှောက်ကြယ်ပွအရှိဆုံးသာမန်အဝတ်၌ထငျရှားကစားကွင်းအတွက်သက်သေအချက်ဖြစ်ပါသည်။ မိုင်မှာအနက်ရောင်ချွေးဘောင်းဘီတိုတောင်းအရှည်နှင့်အင်္ကျီလက်ပေါ်အနက်ရောင် INSERT နှင့်အတူအဖြူရောင်အခွားရှပ်အင်္ကျီကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ အဖြူ moccasins သာနှစ်ဦးကိုပါးလွှာချည်နှောင်, သူ့ဘယ်ဖက်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်တဦးတည်းနှင့်လည်ပင်းပေါ်မှာအခြားဝတ်ဆင်ကနေလက်ဝတ်ရတနာနှင့်အတူတန်ဆာဆင်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွ၏ခြေရင်းမှာ။ Mila သဘာဝကိုပိုမိုနှစ်သက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်, ဒါဟာမလိုအပ်ပါဘူးစဉ်းစားရန်ထိုကဲ့သို့သောအချိန်လေးမှာဆံပင်နှင့်မိတ်ကပ်အကြောင်းကိုခန့်မှန်းဖို့အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်ပါဘူး။ သူမ၏ခင်ပွန်း Ashton ကဤနည်းအားကြည့်ရှုကြ၏။ နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသားဂျင်းဘောင်းဘီအပြာကွက်ရှပ်အင်္ကျီ Sneaker နှင့်ဘေ့စ်ဘောဦးထုပ်ဝတ်ထားခဲ့သည်။ နည်းနည်း Dimitri အနီရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်ထားနေစဉ်ငါ့သမီးတစ်စင်း sundress နှင့်တောက်ပဘောင်းဘီပြသတော်မူကြောင်းကို, ကလေးများနှင့် ပတ်သက်. အတူ။
Ashton ကနှင့်သူ၏သား Dimitri
အင်တာနက်ပေါ်ရှိအဲဒီမှာလမ်းလျှောက်ရာမှဓာတ်ပုံများပြီးနောက်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုဤနေရာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များရေးထားပြီအစီအစဉ်ကိုဖွင့်: "ဤသူကားအ, သင်တန်း, သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းကိုကြည့်ကြဘူး။ အထူးသဖြင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့! တစ်ခုမှာသူမဖွင့်ပါကနေ့စဉ်အသက်တာကိုမှကြွလာသောအခါအမျှဝေးငါသိသည်အတိုင်း, Kuni အဝတ်အစားနှင့်အတူနှောငျ့ယှကျဘယ်တော့မှ "", အိပ်ရာထဲကခုန်တက်နှင့်လေးတွေနှင့်အတူဆော့ကစားရန်အပန်းခြံသို့ပြေးသောအထင်အမြင်ရရှိသွားတဲ့။ သို့သော်ဤဘောင်းဘီကြောက်စရာကိုကြည့်ပါတယ်။ ဆန့်ဒူး ထောက်. ပိုက်ဆံ၏ထိုကဲ့သို့သောပမာဏကြီးမားတဲ့နှင့်အတူမင်းသမီးဒါရွားလှကြည့် "", အရာအားလုံးလုယူကြလော့။ ရဲ့သူမဒေါက်ဖိနပ်နှင့်ဆင်မြန်းဝတ်ဆင်ချင်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်တို့သည်လည်းလမ်းလျှောက်အသစ်တစ်ခုဝတ်စုံကိုဝယ်ဖို့တတ်နိုင်လို့ပြောကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကို run? "စသည်တို့ကို
ဒါဟာသိရန်ခက်ခဲသည်: Mila Kuni အခြေခံကျကျသူမ၏ပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲသွား
Zoe Saldana ဟာဟောလိဝုဒ် "Fame ၏လမ်းလျှောက် on" တဲ့ကြယ်ပွင့်ကိုလက်ခံရရှိ
တစ်ဦးယဉ်ထုံးစံ၌ Mila Kuni Las Vegas မှာ CinemaCon ပွဲတော်ပျေါမှာထငျရှား
Mila နှင့်အတူဓာတ်ပုံများအင်တာနက်ပေါ်ရှိသည်ထင်ရှားပြီးနောက်, များစွာသောသူမအချို့အချိန်လွန်ခဲ့တဲ့ပေး၏သူမ၏အင်တာဗျူးဖို့အာရုံကိုပေးဆောင်။ အင်တာဗျူးကျော်ကြားမင်းသမီးနှင့်အတူစကားလက်ဆုံသူမ၏ကလေးများတို့နှင့်သူမအကြောင်းကဆိုပါတယ်ဘာလဲ:
ကျနော်တို့ Dimitri ခဲ့ပြီးတာနဲ့ "ငါလုံခြုံစွာယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများကြီးထွားကြောင်းပြောပါနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။ အဆင်းလှသောလိင်, သူတို့ကသေးငယ်လျှင်ပင်, တူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏ယောက်ျားလေးများထက်အများကြီးပိုမိုလိမ္မာပါးနပ်သည်။ ကျွန်မကလေးတွေဆော့ကစားကြောင်းအကြံပြုသောအခါ, Wyatt တစ်ကြိမ်မှာဖွင်နှင့် Dimitri ရုံဘေးကနေမှစောင့်ကြည့်။ သူကသူ့ကိုလိုချင်ဘာနားလည်မထားဘူးသူတစ်ဦးအနည်းငယ်သာ Neanderthal နဲ့တူရဲ့။ ငါ၏အသားကိုတက်ပေါက်နှင့်ဤပြပွဲမြင်သောအခါငါ့မျက်မှောက်၌ "ငါ့အများဆုံးခစျြတျောမူသညျလူနှစ်ဦးကိုကြီးထွားနေသောကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, ထိုသူသည်ငါအကြောင်းပြောနေတာငါအဘယ်သို့သောအကြောင်းငါ့ကိုမေးပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်။
Irina Shayk မကြာမီရှစ်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးဒုက္ခသတို့သမီး၏ status တွေနဲ့ဝေးပြုလိမ့်မည်
Amy Adams ကသူတို့ရဲ့ဒုတိယကလေးမျှော်လင့်ပါသလဲ?
အဆင်းအပေါ် Kira ကိုနိုက် "တံထွေးထွေးခြင်း"
Serena Williams ကသူမ၏ကြီးပြင်းအပေါ်သူ့အမိ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကွောငျးပွော
Gigi Hadid မှာဘောင်းဘီကွဲ
မက်ဒေါနားနှင့်သူမ၏သားဗဟိုပန်းခြံက New York City, လက်တန်းဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပေးခဲ့တယ်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုစွပ်စွဲချက်များ Gigi Hadid နှင့်အတူစာချုပ်ဖဲ့
နာမည်ကြီးတွေ၏တစ်ဦးက pair တစုံပြီးစီးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်!
Mischa Barton: ပိုလျှံအလေးချိန်နှင့်အရက်ပြဿနာကို
Ashton Kutcher ကောင်လေးကတီးဝိုင်း "Papa" တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်နှင့်သူ၏အကြိုက်ဆုံးဆန္ဒပြပွဲအကြောင်းကိုပြောပြသည်
Nymphaea - ရေကန်ထဲမှာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ဂရုမစိုက်
တစ်ဦး liqueur အောင်ဘယ်လိုနေသလဲ?
Blake က Lively အတွင်းပိုင်း၏ဒီဇိုင်းနှင့်အလှဆင်စိတ်ဝင်စားတယ်
သမိုင်း၌နှိမ့်ချ Gone: 2017 ခုနှစ်တွင်ဖွင့်ကိုဖဲ့တဲ့သူ 25 ဦးကြယ်ပွင့်စုံတွဲ!
အဘယ်အရာကိုစကော့တလန်ခေါက်ကွောငျကလေး Feed သလော
လိင်တူချစ်သူတွေကဘယ်သူတွေလဲ - လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. 10 ဒဏ္ဍာရီ